Ummeli waseChicago Cannabis Angakusiza Kanjani Ukuqala Ibhizinisi?
Ummeli waseChicago Cannabis Angakusiza Kanjani Ukuqala Ibhizinisi LaseCannabis
Uma ufuna i Ummeli we-cannabis waseChicago, ufike endaweni efanele. Kulesi sihloko, siveza zonke izici ummeli waseChican cannabis azimboza ebhizinisini le-cannabis. Kubalulekile ukwazi ukuthi uyilandela kanjani imithetho nokuthi ungahlala kanjani uvikelekile njengomnikazi webhizinisi.
Enhle Ummeli we-cannabis waseChicago kungakusiza wehlise izingozi futhi wandise isikhathi sokusebenza kwebhizinisi ngempumelelo.
Ukuhambisana nemithetho ye-Illinois Cannabis
Ummeli we-cannabis waseChicago ungumuntu osemthethweni ongakusiza ngokulandela imithetho ye-cannabis yase-Illinois. Ukuthengwa kwensangu yokuzijabulisa kuzoba semthethweni e-Illinois kusuka ngoJanuwari 1, 2020, futhi lesi yisikhathi soshintsho olukhulu embonini ye-cannabis. Abasebenzisi abane-ID ye-Medical Cannabis isiguli esivumelekile bazokwazi ukuthenga insangu yezokwelapha futhi bonke abanye abasebenzisi bavunyelwe ukuthenga insangu ngenhloso yokuzijabulisa.
Amabhizinisi abhaliswe njengezikhalazo azoba nenketho yokuqinisekisa imininingwane yamakhasimende esebenzisa izinhlobo ezikhethekile zezikena ze-ID ze-Cova. Ngalezi sikena, isipiliyoni samakhasimende sizoba ngcono kakhulu enkambweni yokungena ngokushesha nokuthengiselana okungenamthungo. Umkhawulo wokuthenga ungama-ounces ayi-2.5 wezimbali ze-cannabis. Kuzokwazi ukuthenga leli nani lama-ounces ayi-2.5 njalo ezinsukwini eziyi-14.
Omunye umthetho emithethweni ye-cannabis e-Illinois inani le-THC kwimikhiqizo efakwe ngaphakathi kwe-cannabis. Akukho ngaphezulu kwamamayela ayi-500 we-THC azovunyelwa kule mikhiqizo. Izaziso zomkhawulo wokuthenga ozenzakalelayo zizovumela abathengisi ukuvikela ukuthengiswa ngokweqile kweziguli nakumakhasimende asevele efinyelele umkhawulo wokuthenga. Kulokhu, izikhulu zombuso wezikhulu zase-Illinois zifuna ukunciphisa ngokweqile kanye nokudla ngokweqile insangu yezokwelapha.
Abathengisi beCannabis e-Illinois bafuna ukuhlala bethobela imithetho, futhi bazolandelela lezi zenzo ezilandelayo:
Ukuqala nokusungula yokusungula
Ukubika kusebenziseka ngokuzenzakalelayo njengoba iskena seCova sihlanganiswe ngokuphelele nohlelo lokuqinisekisa izwe lonke lwase-Illinois. Ukulawulwa kwangaphakathi nephuzu lezinhlelo zokuthengisa kusekelwe kuwebhu futhi kufinyeleleka umbuso nganoma yisiphi isikhathi. Uhlelo lwe-Cova luhlangabezana nezidingo uma kukhulunywa ngokulawulwa kokusungula okuyisidingo sokugcina imikhiqizo ingekho ezandleni zabancane. Ngasikhathi sinye, imikhiqizo ivikelwe emakethe emnyama nemisebenzi engekho emthethweni.
Oxhumana nabo nokusebenza nge-Cannabis Business
Ummeli we-cannabis waseChicago angakusiza ekubumbeni izinkontileka ezihambisana nokusebenza kwebhizinisi lakho. Kuzinkontileka eziqondile, ungachaza imithetho nezibopho zeqembu ngalinye. Ngokubheka kakhulu imininingwane ngayinye, ummeli we-cannabis waseChicago angachaza izinkontileka ezilandelayo:
Izindatshana Zokufakwa ngaphakathi noma Inhlangano
Isivumelwano Sokubusa Sangaphakathi
Izivumelwano ezivela eceleni
Zonke lezi zinkontileka zenziwa ukuhlinzeka ukuvikelwa okusemthethweni kwamalungelo akho webhizinisi nempahla. Idokodo ngalinye lichaza ukuthi ungasebenza kanjani nebhizinisi lakho ngesikhathi sezimo zebhizinisi ezithile. Ukuhambisana nemithetho nemigomo yase-Illinois kuyinto ebaluleke kakhulu kunqubo yonke yokwenza isivumelwano. Ummeli we-cannabis waseChicago uzokwenza izivumelwano kube lula ukuzisebenzisa futhi ziqonde ukuze wethulwe ngamaphoyinti abaluleke kakhulu wezinkontileka.
Ngaphandle kwe izinkontileka ezishiwo, futhi ungadinga amadokhumenti achaza ibhizinisi lakho ngendlela enemininingwane eminingi. Kulolu daba, kungadingeka ukuthi ube nesivumelwano sokuqashwa esibonisa ukulinganiselwa nemigomo yabasebenzi. Enye incwadi efanelekile yisivumelwano sokuthenga amasheya esichaza ukuthengisa amasheya noma ezinye izindlela zobunini kule nkampani. Umbhalo wesithathu uza nohlelo lwebhizinisi. Lo mbhalo uchaza uhlelo lwebhizinisi le-cannabis elinokuqalisa ukusebenza ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Ukuze wenze wonke lawa madokhumenti, ungadinga ukubonisana okwengeziwe nommeli wakho we-cannabis waseChicago.
Ukuxhumana Nesimo Sezwe lase-Illinois nge-Cannabis Licensing Matters
Ukuxhumana noMbuso wase-Illinois kubalulekile ezicini ezihlukile. Bonke abanini bamabhizinisi abafuna ukuthola ilayisense kumele bathobele imithetho esemthethweni. Izinhlobo eziphambili zezicelo zamalayisense zidinga imininingwane ethile. Ungadinga ukunikela ngemininingwane yakho, isizinda sobugebengu, isisekelo sebhizinisi lebhizinisi elithile le-cannabis, nemali yokufaka yonke ilayisense elithile.
Kulesi simo lapho ufuna ukuthola ilayisense yensangu yokwelashwa, ungadinga ukukhokha imali yesicelo engama- $ 30,000 okuyimali ekhishwa ngokusemthethweni esifundazweni sase-Illinois. Uma uthola ilayisense ye-dispensary, uzokwazi ukuthengisa imikhiqizo ye-cannabis kubantu abadala abaneminyaka engama-21 nangaphezulu. Lokhu kuzokwenzeka kusuka ngoJanuwari 1, 2020.
Izicelo zizofakwa ngokohlelo olukhethekile lokufaka amaphuzu, kanti abafaka izicelo bazokwazi ukuthi ngabe zamukelwe ngoMeyi 1, 2020. Kuzohlinzekwa amalayisense anemibandela angama-75 kuthi abenzi bezicelo abathola ilayisense enemibandela babe nezinsuku ezingama-180 zokuthola indawo efanelekile ukuthengisa insangu. Indawo kumele ivunyelwe yiziphathimandla zoMnyango.
Isikhungo esisemthethweni esiphethwe ngamalayisense we-cannabis e-Illinois siwumnyango wezezimali i-Illinois noMnyango wezeziMali (i-IDFPR).
Ukusiza Ngezakhiwo Zangempela Nezindawo Zokusiza
E-Illinois, kuzoba semthethweni ukukhulisa nokuthengisa ama-cannabis ezindaweni ezithile zombuso ukusuka ngo-2020. Ukuhlangabezana nezidingo ezisemthethweni, kufanele uthintane nommeli waseChicago cannabis ozokuphakamisa ukuthi yiziphi izindawo ezitholakalayo ebhizinisini le-cannabis nokuthi ungasebenza kanjani ngaphakathi izimiso.
Uma uqala ibhizinisi le-cannabis futhi ufuna ukuthenga indawo ethengiswayo, kuhle ukubonana nommeli wakho ngezinketho ongaba nazo. Ukuqala ibhizinisi le-cannabis e-Illinois kulula ngosizo lommeli we-cannabis waseChicago. Uzokwazi ukubona ukuthi yini engaqala embusweni nokuthi ilayisense efanele ingawenza kanjani umehluko. Ngecebo elihle futhi nommeli osezingeni eliphezulu waseChicago, uzothola ithuba lokuba nebhizinisi le-cannabis elisebenza kahle ngombono omuhle wokukhula esifundeni sase-Illinois.